Kuxoshwe abanye abebelwa kuBig Brother | IOL Isolezwe
Kuxoshwe abanye abebelwa kuBig Brother
Isolezwe / 21 June 2012, 12:32pm /
UMANETA noRoki abangabanye abaxoshiwe endlini kaBig brother ngenxa yokungaziphathi kahle nokugcine bashayane.
uRoki oxoshiwe endlini kaBig Brother ngenxa yokungaziphathi kahle
LUZOQHUBEKA njengokujwayelekile uhlelo lwethelevishini oseludide abaningi ngenxa yezigameko zalo, iBig Brother Stargame, edlala ku-Channel 197/8 ku-DStv, kulandela ukukhonjwa indlela omkhaya baseZimbabwe ngemuva kokulwa ngoLwesibili.
Ngemuva kokukhonjwa indlela komculi uRoki nentokazi engumfundi wezomthetho enyuvesi uManeta, ababukeli balolu hlelo basale bebuzana ukuthi ngabe lolu hlelo lusazoqhubeka ngendlela ejwayelekile yokuthi ngeSonto kube khona okhishwayo ngenxa yokudliwa yivoti noma cha.
Kuqubuka lo mbuzo nje intokazi engunontandakubukwa yakuleli uBabalwa “Barbs” Mneno isengozini yokudliwa yizembe njengoba isohlwini lwabangase baphume nensizwa yaseGhana uKeita.
Izikhulu zakwa-M-Net eyengamele ukudidiyelwa nokusakazwa kwalolu hlelo izolo zikucacisile ukuthi yize sekuxoshwe ababili abaphume kungazelele muntu, nangeSonto ukhona omunye ozophuma nakanjani.
ULani Lombard wakwa-M-Net uthe yize kube nalesi sixakaxaka kepha amaphaphu phansi kubabukeli, ngeSonto uhlelo luzoqhubeka njengokujwayelekile.
Laba bakhaya baseZimbabwe baxoshwe ngokususa uthuthuva phezu kokuba bese bekhuziwe ngabaphathi njengoba bese kunezinkomba yokuthi bangase bashayane.
Kulolu hlelo kunomthetho wokuthi akuvumelekile ukuxabana okuhambisana nodlame kanti kuyo le sizini sekuxoshwe usomahlaya waseGhana uDKB nomkhangisi wengqephu waseSierra Leone uZainab nabo abaxoshelwa ukulwa.
NgoLwesibili, ngokubona ukushuba kwengxabano kaRoki noManeta, uBig Brother (ophethe lolu hlelo) ubabizele endlini yakhe eyaziwa ngokuthi yiDiary Room, ebakhuza.
Engakawagwinyi amazwi akhe laba baqhubekile nokuchukuluzana okuholele ekutheni uManeta athathe yonke inhlobo yensipho engamanzi okuhlanganisa neJik wakuxuba wabhunyela ngakho uRoki ebusweni.
ULani uthe imithetho ebekwa kulolu hlelo ikuchaza kahle ukuthi ukulwa nokuthukana okungagcina kuholele ekutheni abantu baxabane baze bashayane akuvumelekile.
“Bayayalwa kahle abantu ukuthi uma bezongena kule ndlu ngokuthi konke okuhambisana nokulwa kumele bakushiye ngaphandle. Kulo nyaka kubukeka kunzima kulolu hlelo njengoba laba sekungabantu besibili ukuthi baxoshwe uhlelo lungakapheli ngenxa yokungaziphathi kahle nangendlela,” kusho uLani.
Uthe njengoba lolu hlelo selokhu laqala lukhombisa ukuthi abantu abaningi abakwazanga ukuyifunda kahle imiyalelo yokuthi akumele omunye umuntu umbeke isandla noma ngabe nicasulene kanjani.
Uqhube wathi uM-Net nenkampani yakwa-Endemol abasebenzisana nayo bayakuqinisekisa ukuthi ukulwa okuze kugcine ekutheni abantu babambane ngezandla kumele bazi ukuthi akukho okuyokhulunywa nabo kodwa bayoxoshwa ngokushesha.
Uphethe ngokuthi uManeta noRoki bazothola ukwelulekwa ngokwengqondo ukuze basizakale ekutheni bangalwisana kanjani nokuthukuthela okuholela odlameni.